Aogositra 2, 2010 amin'ny 3:35 am
Moa ve tsy ho mety hanampy ny safidy ny asa fandikan-teny disabling ny ho hita eo amin'ny asa atao renirano? Ao amin'ny tranonkala amin'ny fiteny maro, clogs izany ny renirano tena be, sy ny mpampiasa tsy mahazo mahita ny zavatra hafa mitranga…
Aogositra 2, 2010 amin'ny 4:14 am
Ny Vina dia hoe azo voasivana avy, Tsy misy asa be io karazana, raha tsy misy mpandika teny olombelona izay tafiditra amin'ny mandika teny. fa OK, Hampiako ny safidy ho avy dikan-
Aogositra 4, 2010 amin'ny 8:31 am
Hataoko fa rehefa reraka amin'ny fahatsiarovana try mba hiteraka Sitemap amin'ny Google Sitemap plugin (amin'ny farany Sitemap fototra). Tsapako izany satria ny bilaogy manana 1,959 Lahatsoratra, ary 12 languange fandikan-teny mampandeha.
Misy Vakio ny nizara ny Sitemap ho 3-5 anjara?
Aogositra 5, 2010 amin'ny 12:03 aho
Nataoko ny tetikasa ho an'ny colnect.com amin'ny Sitemaps, izay niteraka fiteny isan-Sitemap sy ny fanondroana rakitra ~ 3 tapitrisa URLs. Tsy misy fahatsiarovana mihavitsy any, na izany aza fampiharana izany teo amin'ny Google Sitemap plugin dia tsy misy dikany, ary ny mpanoratra tampina nanamavo ny tany aloha (1 Liner…) ka fikojakojana izany dia ho be loatra ny manahirana amin'izao fotoana nomena ny zava-dehibe indrindra. Izany dia endri-javatra Azonao atao na ny fehezan-dalàna tany am-boalohany, na manontany plugin mpanoratra ho fampiharana.
Azonao atao ny mahita ny lahatsoratra nadika eto:
Miala tsiny aho tsy misy kely azoko atao amin'izao fotoana izao
Aogositra 7, 2010 amin'ny 9:22 aho
Tiorka an'i Anglisy translate olana. Misy tarehin-tsoratra Tiorka olana 🙁
ü,ç,Ô tarehin-tsoratra olana
Aogositra 7, 2010 amin'ny 1:57 am
Olana raikitra ny svn, mila télécharger sy hanolo ny raki-daza .js ampiasaina. Dia ho raikitra ao amin'ny avy tsy ho ela 0.6.2 fanafahana (roa andro)
Aogositra 7, 2010 amin'ny 9:38 am
Alohan'ny hanatsarana izany, azonao ampiana endri-javatra ho an'ny madio / entana ao rakitra ho an'ny cache?
Satria efa ny 20mb ho an'ity latabatra, ary misy table roa. CMIIW
Aogositra 7, 2010 amin'ny 9:58 am
Transposh plugin niezaka aho ny fotoana voalohany nametraka vaovao